EX - ABSDF: ကြိုးသုံးချောင်းတော.ကျန်နေမည် သရ၀ဏ် (ပြည်)
ကျွန်တော် ကျွန်မတို.သည် စစ်အာဏာရှင်တွေလက်အောက်မှာနေထိုင်ရခြင်းကို ဘယ်တုန်းကမျှ မနှစ်သက်ခဲ.ပါ ဆိုခြင်းကိုမြန်မာပြည်သူများသည် ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ.တွင် တကမ္ဘာလုံးသို.သတင်းစကားပါးခွင်.ရလိုက်ပြီဖြစ်သည် ။
ကျွန်တော်တို. အဟောင်းတွေကိုမလိုချင်ဘူး။ ကျွန်မတို. လူဟောင်းတွေကို စိတ်ကုန်နေပြီ ။
ကျွန်တော် ကျွန်မတို. ပြောင်းလဲမှုကိုလိုချင်ပြီ။ တိုင်းပြည်ဟာ လူသစ်စိတ်သစ်နဲ.ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ ။
စသည်.စကားလုံးများကိုပါးစပ်မှထုတ်မပြောပါပဲ ထိုအနက်အဓိပါယ်ရသောအပြုအမူများကို တတိုင်းပြည်လုံး၏မဲဆန္ဒရှင်အများစုသည် ညီညာဖျဖျဆန္ဒဖော်ထုတ်လိုက်ကြပြီဖြစ်သည် ။ကျွန်တော် ကျွန်မတို.သည် တပ်မတော်မှဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးနေသော အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်၊ ဥပဒေပြုရေးစနစ်၊ တရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုအလိုမရှိပါ ။ထိုအရာများအစား ပညာတတ်အရပ်သားများနိုင်ငံကိုဦးဆောင်စေချင်ပါသည် ဟု မဲလက်မှတ်များမှတဆင်.ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်ရာ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များသည် ယခုလောက်ဆိုလျှင် ပြည်သူ.ဆန္ဒကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်သဘောပေါက်လောက်ပြီဟုယူဆပါသည် ။ပြည်သူတွေပျော်နေကြပါသည် ။ နိုင်ငံတော်လူကြီးများသည်အရှုံးကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ လက်ခံကြလိမ်.မည်ဟုမျှော်လင်.ပါသည် ။ တိုင်းပြည်သည်ကောင်းသောအနာဂါတ်ဆီသို.ဦးတည်ရွေ.လျားတော.မည်ဟုယူဆပါသည် ။ ကျွန်တော်တို.စာရေးဆရာများသည် ဒီမိုကရေစီဘက်က အသည်းပေါက်အောင်ရေးခဲ.သားခဲ.ရကျိုးနပ်သည်ဟုလည်းယူဆပါသည် ။ ရှုံးသွားသူပြိုင်ဘက်များ ၊တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်အချို.အတွက်လည်းဝမ်းနည်းမိပါသည် ။ မြန်မာပြည်သည် နေ.သစ်စတင်ပေပြီ ။
သို.သော်နိုင်ငံရေးတွင် အဆိုးမြင်လွန်းခြင်း ၊ အကောင်းမြင်လွန်းခြင်းတို.သည် အမှန်တရားနှင်.ဝေးကွာစေ၏ ။ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းမြင်တတ်မှ ရှေ.ဆက်ရမည်.ခရီးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည် ။ အမှန်အတိုင်းသုံးသပ်သော် ကျွန်တော်တို.ပြည်သူများသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်းစောမောင် ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေတို.လက်ထက်က ဘာနှင်.တူသလဲဆိုလျှင် ခြေတွေလက်တွေကို ကြိုးနှင်.တင်းကြပ်စွာတုပ်နှောင်၍ တိုင်မှာကြပ်တည်းစွာချည်နှောင်ခံထားရသည်. နွားသတ္တ၀ါတွေနှင်.တူ၏ ။ တုပ်တုပ်မျှလှုပ်၍မရပဲ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားစွာလူ.ဂုဏ်သိက္ခာကင်းမဲ.စွာနေလာခဲ.ရသည် ။ ၂၀၁၀ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာသောအခါတွင် ဒီမိုကရေစီတပိုင်း ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများတပိုင်း ဖားတပိုင်းငါးတပိုင်းအစိုးရကြောင်. ပြည်သူလူထု၏ဘ၀မှာ လွတ်လပ်မှုအတော်အသင်.ရလာရာ ခြေ လက်တို.တွင်ကြပ်တည်းစွာတုပ်နှောင်ထားသော ကြိုးများကိုဖြည်ပေးလိုက်ပြီး အတန်ငယ်ကျယ်ဝန်းသော နွားတင်းကုပ်ထဲ ၊ မြင်းဇောင်းထဲဝယ် တ၀ဲလည်လည်သွားလာခွင်.ရလာသော နွားများ၊မြင်းများနှင်.တူလာပေ၏ ။ ကျွန်တော်တို.သည် တင်းကြပ်သောအနီးကပ်တုပ်နှောင်မှုများမရှိတော.သဖြင်. ဟိုမှသည်မှ သွားနိုင်လာနိုင်၏ ။ အမြီးမြှောက်ခွင်. ၊ ခွာရှပ်ခွင်. တကောင်နှင်.တကောင်ခွေ.ခွင်.များရလာကြသည် ။ သို.သော်စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်၍သေသေချာချာတွေးကြည်.လိုက်လျှင် ခြင်းထဲမှလွတ်၍ လှောင်အိမ်ကြီးထဲသို.ရောက်လာရုံမျှသောလွတ်လပ်မှုမျိုးဖြစ်နေပါသေးသည် ။ ချည်တိုင်မှကြိုးဖြုတ်၍ တင်းကုပ်ထဲဝယ် သွားလာနိုင်သောအဆင်.သို.တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည် ။ သို.သော်တပြည်လုံးသည် ယခုအခါ ထိုနွားတင်းကုပ်ထဲမှ ညီညာဖျဖျ ရုန်းထွက်လိုက်ကြပါပြီ ။ လွတ်လပ်သောပြင်ပကမ္ဘာဆီသို.ထွက်နိုင်ခဲ.ပါပြီ ။ထွက်ပေါက်တခုကိုရှာတွေ.ခဲ.ပါပြီ ။ ကျွန်တော်တို.သည် စိမ်.ကြီးမြိုင်ကြီးတွင်ကျင်လည်ကျက်စားသောလုံးဝလွတ်လပ်သည် မြင်းရိုင်း ၊နွားရိုင်းတို.ဘ၀ကဲ.သို. မိမိစိတ်ကြိုက် သွားနိုင် စားနိုင် ကိုယ်.ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်သည်.အဆင်.သို.ရောက်ပြီ ဟုထင်ကောင်းထင်နေကြပေလိမ်.မည် ။ သို.သော် ဤသို.မဟုတ်သေး ။ ကျွန်တော်တို.သည် ပိတ်လှောင်ခံထား၇သော ခြံထဲမှ ၀မ်းသာအားရပြေးထွက်ခွင်.ရပြီဖြစ်သော်လည်း ကြိုးရှည်ရှည်ဖြင်.လှန်ထားခံရသလို ကြိုးသုံးချောင်းတော. တဲနှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်သည် ။ ပြည်သူလူထုဟူသောနွားကြီးအား ဖွဲ.စည်းပုံဥပဒေဆိုသော ကြိုးကြီးသုံးချောင်းဖြင်.နဖားကြိုးထိုးကာ ထိမ်းချုပ်ထားဆဲပင်ရှိလေသည် ။ လုံးဝလွတ်လပ်သောအဆင်.သို.ရောက်သေးသည်မဟုတ်ပါ ။၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ခြင်းသည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခု၏ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမဟုတ်ပဲ ဇာတ်လမ်းကအခုမှစမည်. အဖွင်.မြင်ကွင်းသာဖြစ်သည် ။ ပြည်သူလူထုမကြည်.ချင်ပဲကြည်.နေရသော ဖန်တရာတေအော်ပရာပြဇာတ်ကြီး ကန်.လန်.ကာချသွားပြီး လူထုအောင်သံပြဇာတ် ကန်.လန်.ကာဖွင်.ကာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတခန်းစတင်နိုင်လိုက်ရုံပဲရှိပါသေးသည် ။ ဆက်ကရမည်.ဇာတ်လမ်းကရှည်ပါသေးသည် ။
မြန်မာ.နိုင်ငံရေး၌ ဒီမိုကရေစီကို နဖားကြိုးတဲထားသည်နှင်.တူသောကြိုးသုံးချောင်းမှာ ပြည်သူလူထုကရွေကောက်တင်မြှောက်လိုက်သော အစိုးရအဖွဲ.တွင် ပြည်ထဲရေး ၊ ကာကွယ်ရေး ၊ နယ်စပ်ရေးရာစသောဝန်ကြီး သုံးဦးမှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှတိုက်ရိုက်ခန်.အပ်ပိုင်ခွင်.ရှိနေသေးခြင်းဖြစ်သည် ။ အဓိပါယ်မှာ ပြည်သူလူထု ဆန္ဒမဲဖြင်.ရွေးကောက်ပွဲတွင်မည်မျှ အနိုင်ရလာပါတီဖြစ်စေ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရာ၌ဤဌာနသုံးခုကိုအုပ်ချုပ်ခွင်.ရမည်မဟုတ်ပေ ။ထိုသုံးဌာန (၀ါ) ကြိုးသုံးချောင်းကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လက်ထဲတွင်ကိုင်ထားဦးမည်ဖြစ်သည် ။ ထိုကြိုးသုံးချောင်းဖြင်.နဖားကြိုးအထိုးခံရပေဦးမည် ။ ထိုကြိုးသုံးချောင်းတွင်ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အရေးအကြီးဆုံးမှာ Ministry of Internal Affair ခေါ်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရပ်ကွက် ၊ကျေးရွာ ၊မြို.နယ် ၊ခရိုင် ၊ တိုင်း နှင်.ပြည်နယ် အဆင်.ဆင်.ကိုတကယ်အုပ်ချုပ်သည်မှာ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ( General Administration ) မှဖြစ်သည် ။ ထွေအုပ် ဌာနကြီးသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၏လက်အောက်တွင်ရှိသည် ။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးသည်တပ်မတော် ကာချုပ်မှခန်.အပ်သည်.လက်ရှိစစ်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ဖြစ်သည်။ ထို.ကြောင်.အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာသည် တပ်မတော်ကကိုင်ထားဆဲဖြစ်သည် ။ တဖန်မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရာရုံးများအားလုံးသည်သမ္မတကခန့်သောတရားသူကြီးချုပ်လက်အောက်မှာပင်ရှိသည် ။ ထို.ကြောင်.သမ္မတသည်စစ်တပ်မှဖြစ်ခဲ့ လျှင် တရားစီရင်ရေးသည် စစ်တပ်၏သြဇာအောက်သို.ကျရောက်နေဆဲဖြစ်သည် ။ ရဲတပ်ဖွဲ.သည်လည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာပင်ဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင်.ရဲတပ်ဖွဲ.သည် ပြည်သူကိုဗဟိုပြု၍အလုပ်လုပ်သည်ထက် ယခင်အတိုင်း အမိန်.အာဏာညွှန်ကြားချက်များဖြင်. စစ်တပ်၏လက်အောက်ခံသဖွယ်ပြုမူနေဦးမည်ဖြစ်သည် ။ တဖန် အကျဉ်းဦးစီးဌာနသည်လည်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာပင်ရှိ၍ အကျဉ်းထောင်အရာ၇ှိများသည် ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများထက် စစ်အာဏာပိုင်များကိုသာမျက်နှာမူ၍အမိန်.နာခံကာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည် ။ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အသာစီးယူထားသော ၀န်ကြီးသုံးပါးတွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးသည် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည် ။ အုပ်ချုပ်ရေးကသတင်းပေး၊ ရဲကဖမ်း ၊ တရားသူကြီးကစစ်၍ထောင်ချ ၊ အကျဉ်းထောင်ကထိမ်းသိမ်းအပြစ်ပေးရသည်ဖြစ်ရာ ထိုလေးဖွဲ.စလုံးသည် တပ်မတော်ကခန်.ထားသော စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဝန်ကြီးတပါးလက်အောက်သို.ကျရောက်နေခဲ.ပြီဆိုလျှင် ပြည်သူ.အာဏာ ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာဖော်ဆောင်ဖို.ခက်တော.မည် ။ ပြည်ထဲရေး ၊ကာကွယ်ရေး ၊ နယ်စပ်ရေးရာဟူသောကြိုးသုံးချောင်းတွင် ကာကွယ်ရေးနှင်.နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနများတပ်မတော်လက်အောက်ခံဖြစ်နေသည်မှာ များစွာ ပြသနာမရှိသေး ။ ထိုအချက်များမှာနောက်မှအေးအေးဆေးဆေးဖြေရှင်း၍ရသည် ။ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးသည်စစ်တပ်မှဖြစ်နေခြင်းကားအကြီးမားဆုံး နှောင်ကြိုးကြီးဖြစ်နေပါသည် ။ ယခင်အတိုင်းလာဘ်စားမှု ၊ယခင်အတိုင်း အာဏာအလွဲသုံးမှု ၊ယခင်အတိုင်း ဥပဒေအထက်တွင် စစ်အာဏာပိုင်များရှိနေမှု တို.သည် ဆက်ရှိနေပေလိမ်.မည် ။ထိုအရာများကိုမရပ်တန်.နိုင်လျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောနေသော တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုသည် ဖြစ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ ။ ဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုတကယ်ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုလျှင် ထိုကြိုးသုံးချောင်းကိုဖြတ်နိုင်ဖို.လိုသည် ။ လောလောဆယ်သိပ်အနှောက်အရှက်မဖြစ်သေးသောကြိုးနှစ်ချောင်းကိုဖယ်ထား၍ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးလက်ထဲတွင်အာဏာများစုပြုံကိုင်ထားသောနဖားကြိုးကို ရတတ်သမျှစတင်ဖြတ်တောက်ရပါလိမ်.မည် ။ မည်သို.လုပ်မည်နည်း ။ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်လည်းတပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသဘောတူညီချက်မပါပဲပြင်၍မရသေးပါ ။ တပ်ကလဲချက်ခြင်း အခြေခံဥပဒေ၊ စပြင်ဖို.သဘောတူမည်မဟုတ်ပါ ။ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးအား အရပ်ဘက်မှခန်.ခွင်.မရှိပါ ။ သို.နောက်တက်လာမည်. သမ္မတသည် ရဲဝံ.ပါးနပ်ပါက ဥပဒေဘောင်ထဲမှလုပ်၍ရသည်.နည်းရှိပါသည် ။
ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်း (၅)အုပ်ချုပ်ရေးဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်မှ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏တာဝန်နှင်.လုပ်ကိုင်ခွင်. ပုဒ်မ ၂၀၂ တွင်
“ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏သဘောတူညီချက်ဖြင်.
(က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၀န်ကြီးဌာနများကို လိုအပ်သလိုသတ်မှတ်နိုင်သည် ။ထို.ပြင်ဝန်ကြီးဌာနများကိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း ၊ဖြည်.စွက်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ခ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရေကိုလိုအပ်သလိုသတ်မှတ်နိုင်သည် ။ ထို.ပြင်သတ်မှတ်ဦးရေကိုတိုးခြင်း ၊ လျှော.ခြင်းပြုနိုင်သည် ။ “ ဟုအတိအလင်းပြဌာန်းထားပေသည် ။ ဤသည်မှာကောင်းသောဂယ်ပေါက်တခုဖြစ်သည် ။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင်ရောက်ရှိနေသော စသုံးလုံး (အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန BSI)နှင်.အကျဉ်းထောင်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ များကို နိုင်ငံတော်သမ္မသည် ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၀၂ (က) လုပ်ပိုင်ခွင်.ကိုအသုံးပြု၍ ၀န်ကြီးဌာနအသစ်တခုအောက်သို.ပြောင်းရွှေ.ပစ်၍ရသည် ။ ဥပမာအားဖြင်. တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ( Ministry of Justice ) ဟူ၍အသစ်ဖွဲ.ပြီး တရားရုံးများကို ထို ၀န်ကြီးဌာနအသစ်သို.ပြောင်းရွေ.နိုင်ခဲ.လျှင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး (တပ်မတော်)လက်အောက်သို.ရောက်နေသောအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ တရားစီရင်ရေးသွယ်ဝိုက်ထိမ်းချုပ်အာဏာကို ပြည်သူ.လက်အောက်သို.ရောက်အောင်ပြန်ခေါ်နိုင်ပေလိမ်.မည် ။ ဤသို.လုပ်ရာတွင် တပ်မတော်အားထိပါးလိုခြင်းမဟုတ်ပဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပိုမိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်လို၍ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များကိုသေသေချာချာ ရှင်းလင်းတင်ပြပေးရမည် ။ တပ်မတော်သည်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ.များကိုအုပ်ချုပ်လိုစိတ်အာသီသပြင်းထန်လှသဖြင်. သူတို.နှင်.ထိပ်တိုက်မတွေ.စေရန် ရဲတပ်ဖွဲ.ကိုတော. ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးလက်အောက်မှာပင် ယခင်အတိုင်းဆက်လက်ထားပေးရမည် ။ ကာကွယ်ရေး ၊နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးများကိုလောလောဆယ်မထိသေးပဲ တပ်မတော်နှင်.အဆင်ပြေသောဆက်ဆံရေးရအောင် ယခင်အတိုင်းဆက်လက်ထား၇ှိပြီး နှစ်ဖက်နားလည်မှု တိုးတက်အောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည် ။အမျိုးသားရင်ကြားစေ.ရေးကိုဆောင်ရွက်ရမည် ။
တရားရုံးများသည်အုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်မှကင်းလွတ်သွားသည်နှင်. တပ်မတော်မှဝင်ရောက်စွက်ဖက် လွှမ်းမိုးမှုမရှိတော.ပဲ လွတ်လပ်သောတရားစီရင်ရေးစနစ်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပေလိမ်.မည် ။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးဖြစ်စဉ်များပေါက်ပေါက်လာပေလိမ်.မည် ။ ပြည်သူလူထု၏တရားဥပဒေအပေါ်ယုံကြည်မှု ပြန်လည်မြင်.မားလာလိမ်.မည် ။ ထိုအခါ ငွေပေး၍ဖြေရှင်းခြင်း ၊လက်နက်ဖြင်.အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းခြင်း ၊ အမိန်.အာဏာဖြင်.ဖြေ၇ှင်းခြင်းများနည်းပါးသွားပြီး အရာရာကိုဥပဒေအရဖြေရှင်းတတ်သောဒီမိုကရေစီအလေ.အထများပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်သည် ။ဥပဒေအထက်တွင်မည်သူမျှမရှိဟူသောဖုန်တက်နေသည်.ဆောင်ပုဒ်ကလေးအသက်ဝင်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမည်. နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ မြန်မာ.ဥပဒေစိုးမိုးမှုကို ပိုမိုသက်ဝင်ယုံကြည်လာမည်ဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံ၌အလိုအပ်ဆုံးမှာ လွတ်လပ်သောတရားစီရင်ရေးစနစ်တခုပေါ်ထွန်းလာဖို.ဖြစ်သည် ။ ကျူးလွန်သောပြစ်မှုတူစေကာမူ အဘနှင်.သိလျှင်ထောင်မကျပဲ မျက်နှာမွဲဆိုလျှင် ပြစ်ဒဏ်အတိုင်းခံရသော တလမ်းသွားဥပဒေစနစ်ကိုရပ်တန်.နိုင်မည်ဖြစ်သည် ။ဤကားနှောင်ကြိုးတခုကိုဖြတ်တောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည် ။မဖြတ်နိုင်သည်.တိုင် နဖားကြိုးထဲမှအပြင်သို.ဆွဲထုတ်နိုင်မည်.နည်းလမ်းဖြစ်သည် ။
နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲတွင်အပြတ်အသတ်အနိုင်ရသောပါတီသည် အစိုးရဖွဲပြီး တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရာတွင် အခက်အခဲ များမှာမရေတွက်နိုင်အောင်ရှိပေ၏ ။ ပထမဆုံး သမ္မတလောင်းနှစ်ယောက်ရွေးပေးရမည် ။ထိုသမ္မတလောင်းနှစ်ဦးနှင်.တပ်မတော်မှတင်သွင်းလာသော သမ္မတလောင်းတဦး စုစုပေါင်းသုံးဦးထဲမှတဦးကိုရွေးပေးရမည် ။ ထိုရွေးချယ်ခံရသူသမ္မတသည် ပြည်သူလူထုကလက်ခံသူ ၊တပ်မတော်မှလည်းလက်ခံသူဖြစ်ဖို.လိုသေးသည် ။ ထိုသမ္မတကအစိုးရအဖွဲ.ဖွဲ.ရာတွင် ဒီမိုကရေစီလည်းဆန်စေ၇န် ၊ ဖွဲ.စည်းပုံဥပဒေကိုလည်းမကျော်လွန်စေရန်၊တိုင်းရင်းသားတို.လည်းကြေနပ်စေရန် အာဏာခွဲဝေရေး ၊ ၀န်ကြီးဌာနခွဲဝေရေးလုပ်ရပေမည် ။ ဖောင်းပွနေသော ၀န်ကြီးဌာနများကိုဖျက်သင်.တာဖျက် ၊ပေါင်းသင်.တာပေါင်း ၊ အသစ်ထပ်ဖွဲ.သင်.တာဖွဲ. လုပ်ရမည် ။ သမ၀ါယမ၀န်ကြီးဌာနလို ၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနလို ၊သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ခြောက်ခုထားသလို စနစ်မျိုးကိုပြင်ရမည်ဖြစ်သည် ။မလိုအပ်သောဝန်ကြီးဌာနများဖျက်သိမ်းရမည် ။ထပ်နေသောဌာနများပေါင်းပစ်ရမည် ။ လိုနေလျှင်ထပ်ချဲ.ရမည် ။သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုလျှင် နိုင်ငံတကာတွင်မရှိသောဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သည် ။ သာသနာရေးသည် ပြည်ထဲရေးနှင်.ပေါင်း၍ရသောဌာနဖြစ်သည် ။ သို.မဟုတ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင်.ပေါင်း၍ရသောဌာနဖြစ်သည် ။ ဦးစီးဌာနအဆင်.လောက်ရှိလျှင်ပင်အလုပ်လုပ်၍ရသောဌာနဖြစ်သည် ။ ပို.ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနရှိပါလျက် မီးရထားဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ထပ်ထည်.ထားခြင်းမှာလည်း မျိုးတူနှစ်ခုထပ်နေသလိုဖြစ်နေသည် ။ ဒါတွေကို သမ္မအသစ်သည် ပြန်လည်ရှင်းလင်းတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည် ။
သို.သော်ပြည်သူအချို.ထင်နေသလို NLD က အပြတ်အသတ်အနိုင်ရလိုက်သဖြင်. ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအစိုး၇အသစ်ပေါ်ပေါက်လာတော.မည်ဟုတော.မျှော်လင်.၍မရပါ ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အစိုးရသစ်နှင်. ပြည်သူများကိုတဲနှောင်ထားသော နှောင်ကြိုးသုံးကြိုးကျန်နေပါသေးသည် ။ ထို.နှောင်ကြိုးများမှာ ပြည်ထဲရေး ၊ ကာကွယ်ရေး ၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဟူသော နှောင်ကြိုးများဖြစ်သည် ။ ဥပဒေပြုရေးတွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဟူသော နှောင်ကြိုးကလည်းရှိနေပါသေးသည် ။ မည်သို.ပင်ရှိစေစိတ်ပျက်အားငယ်စရာတော.မရှိပါ ။ Necessity is the mother of invention (လိုလျှင်ကြံဆနည်းလမ်းရ ) ဟူသောစကားပုံလိုပင် တဖြည်းဖြည်းနှင်.ဖြေရှင်းသွားနိုင်ပါသည် ။အရေးကြီးသည်မှာ ကိုယ်.ခြေထောက်တွင်ကြိုးချည်ခံထားရသည်ဆိုခြင်းကို သတိထားမိလျှင် ထိုကြိုးကိုဖြုတ်နိုင်မည်.နည်းကို ရှာကြံနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။ ချည်နှောင်ထားခံရသည်ကိုမှမသိလောက်အောင်ဖြစ်နေလျှင်မူကား မည်သည်.အခါမှရုန်းထွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ ။ ကျွန်ုပ်တို.သည် NLD ရွေးကောက်ပွဲတွင်နိုင်သဖြင်. အလွန်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မိပါ၏ ။ သို.သော်သွားရမည်ခရီးကဝေးသေးသည် ။ ချည်ထားသောကြိုးများကခိုင်လှသည် ။ဇာတ်လမ်းကယခုမှအစပင်ရှိပေသေးသည် ။ နောက်ထပ်ကြိုးများအကြောင်း အလျဉ်းသင်.လျှင်ရေးပါဦးမည် ။
Posted by lu bo at 5:59 AM